Ahoana ny fifehezana ny torimaso amin'ny Apple Watch | Vaovao IPhone
Ahoana ny fifehezana ny torimaso amin'ny Apple Watch
Luis Padilla | | Fampiharana iPhone, Apple Watch
Zavatra tsy tadidin'ny mpampiasa maro momba ny Apple Watch dia ny fanaraha-maso ny torimaso. Na dia manolotra an'io endri-javatra io aza ny fehin-tànana manisa hafa, dia tsy ampidirin'ny Apple Watch, tsy isalasalana fa noho ny iray amin'ireo fetrany lehibe: ny bateria. Ny Apple Watch avy amin'ny niandohany dia tsy maintsy nenjehina isan'andro, ary ny ankamaroantsika dia misafidy ny hanao izany rehefa matory isika. Na izany aza, miova tanteraka ny fiovana amin'ny famantaranandro vaovao an'ny Apple, satria na ny Apple Watch S1 na ny S2 dia mamela anao hanery ny baterinao mandritra ny roa andro. Azavainay ny fomba hanaraha-maso ny torimaso amin'ny Apple Watch.
1 Fomba iray hafa anaovana azy
2 Fangatahana fety fahatelo
Fomba iray hafa anaovana azy
Ny zavatra voalohany dia ny manova ny fanazaran-tena rehefa mamaky famantaranandro, satria raha tena afaka manara-maso ny torimaso amin'ny fomba azo antoka kokoa ianao dia mila manao azy, noho izany dia tsy ho afaka avelanao amin'ny alina eny amin'ny latabatra eo am-pandriana. apetraka eo amin'ny faladiany. Rahoviana aho no hanome vola azy io? Ny filamatra araka ny fitsapana nataoko dia ny fanaovana azy indroa: ny maraina rehefa mifoha ianao rehefa miomana handao ny trano sy ny hariva, alohan'ny hatoriana.. Amin'izany fomba izany, rehefa misakafo maraina, mandro sy miakanjo ianao, dia hameno ny famataranandro ary amin'ny alina, raha mipetraka mangina eo amin'ny seza ianao mankafy ny andianao tianao indrindra, dia hameno indray ny bateria. Azonao atao ny mitafy ny famantaranandro raha tena ilaina izy io: mandritra ny tontolo andro, araho maso ny hetsika ataonao ary amin'ny alina raha matory ianao.
Fangatahana fety fahatelo
Tsy misy fampiharana teratany ao amin'ny Apple Watch izay tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny torimaso (ny fangatahako ny watchOS 4). Saingy feno azy ireo ny App Store, ny sasany aza maimaim-poana. Nifidy izay mahaliana indrindra izahay mba hanandramanao ho anao, na dia aleoko aza ilay voalohany: AutoS Sleep. Mazava ho azy, aza avela hisy hieritreritra fa ny angona azo dia manakaiky ny zavatra azo tanterahina amin'ny fanaraha-maso tena izy miaraka amin'ny fitaovam-pitsaboana manokana, na dia tsy ilaina amin'ny ankamaroany aza izany.
Ny fampiharana izay manome valiny marina kokoa, ary manolotra anao aza ny safidy tsy anaovanao ny famantaranandro, na dia mazava ho azy aza fa kely kokoa ny antsipiriany momba ny valiny. Tsikaritra ho azy izany rehefa mandeha matory miorina amin'ny fihetsiky ny iPhone sy ny Apple Watch ianao ary mampiasa ny angona rehetra angonin'ny famantaranandro ho fanaraha-maso ny torimasonao, toy ny fivezivezena sy ny tahan'ny fo. Ary izany rehetra izany raha tsy misy fampiharana apetraka amin'ny famataranandro, noho izany dia tsy hisy hetsika ambadika izay hamono ny batterin'ny Apple Watch anao. Tena mahavariana ary mieritreritra aho fa mendrika ny vidiny.
Fampiharana maimaim-poana izay manome valiny tena tsara ihany koa, tsy misy tahirin-kevitra betsaka tahaka ilay teo aloha, fa mihoatra noho izay ho an'ny mpampiasa maro izay tsy mila fanaraha-maso tsotra fotsiny. Mametraka fampiharana ao amin'ny Apple Watch izy io, ary tsy maintsy asehonao hoe rahoviana ianao no matory sy rehefa mifoha.
Ity rindranasa ity dia manome angona antsipiriany betsaka kokoa, na dia ilaina aza izany mividy fitaovana fanampiny izay mamantatra ny fivezivezena eo amin'ny fandriantsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Ahoana ny fifehezana ny torimaso amin'ny Apple Watch
cybermusic dia hoy izy:
Tiako kokoa ny Pillow and Sleepwatch, ity farany dia mamantatra ny tenany rehefa matory ianao
Valio amin'ny cibermusic
TXR dia hoy izy:
Miankina amin'ny namana izany, satria raha tsy mandro ianao amin'ny alina ary amin'ny alina dia modia tara ianao ary tsy mahita andian-dahatsoratra, dia holazainao amiko rehefa entinao izany. Avia… manomboka amin'ny maodely iray mba hikajiana ny torimaso mifototra amin'ny fiainanao isan'andro sy ny safidinao / ny fahafaha-manaonao… lamba inona…
Valiny amin'ny TXR
Keko jones dia hoy izy:
Rehefa avy nanandrana maromaro (afa-tsy AutoS Sleep) dia nijanona tao Pillow aho, ho ahy no tsara indrindra. Te hanandrana ny AutoS Sleep aho fa matahotra mandoa € 3 sao tsy tiako any aoriana.
Valiny tamin'i Keko Jones
Tonic. dia hoy izy:
Nanandrana natory aho ary nitombo ny fihinanana bateria. Rehefa avy nanandrana toerana maro samihafa ianao, esory amin'ny andro fahatelo. 3 € ao anaty fako.
Valiny tamin'i Toni C.
Ny rindranasa tsara indrindra hikarohana asa amin'ny iPhone-nao
Runtastic Heart Rate PRO, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra